सरकारभन्दा संगम स्वीटका मालिक शक्तिशाली ! आफूखुसी खोले शिल्ड (भिडियोसहित) « News24 : Premium News Channel
सरकारभन्दा संगम स्वीटका मालिक शक्तिशाली ! आफूखुसी खोले शिल्ड (भिडियोसहित)
‘शक्तिशाली’ संगम स्वीट !
अतिगुणस्तरहीन मिठाई बेचेको फेला पारेपछि मंगलबार बानेश्वरस्थित संगम स्वीटमा शिलबन्दी भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र केही उपभोक्ताकर्मीको अनुगमन टोलीले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने गुणस्तरहीन मिठाई फेला पारेपछि संगम स्वीटमा शिल लगाएको हो ।
अनुगमनका क्रममा सन् २०११ मा म्याद सकिएको ‘कोकोनट पाउडर’ प्रयोग गरी बर्फीलगायत मिठाई बनाएको भेटिएको थियो । त्यस्तै अखाद्य ‘हाइड्रो १’ केमिकल प्रयोग गरेर दूध तथा रसबरी सेतो बनाउने गरेको पाइएको थियो ।
स्वस्थ्यमा असर गर्ने मिठाई बेचेको फेला परेपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि संगम स्वीटमा शिल लगाइएको थियो । शिलबन्दी भएको पसलको कडा निगरानी राख्ने र कानुनबमोजिम कारबाही हुने बताइएको थियो ।
शिलबन्दी भएको तीन दिनसम्म संगम स्वीट बन्द भयो । यसबीचमा अर्को कुनै सूचना जारी भएको पनि छैन । तर, बन्द भएको चौथो दिन संगम स्वीट्सका मालिकले आफूखुसी पसल खोले ।
शनिबारदेखि संगम स्वीट पूर्ववत् ढंगमा सञ्चालनमा आयो । तर, खाद्यय प्रविवि तथा गुण नियन्त्रण विभाष्का महानिर्देशक सञ्जिवकुमार कर्णले संगम स्वीट्स नखुलेको एकोहोरो दावी गरे ।
जनस्वास्थ्यमा घात गरेको भन्दै शील गरिएको संगम स्वीट्स कुन शक्तिको आडमा खोलियो ? मीठाई पसल सञ्चालकको एक्लो हिम्मतमा मात्रै यो संभव थिएन/छैन । अझ खुलेको तथ्यलाई सरकारी अधिकारी जबरजस्त लुकाउने प्रयासमा थिए ।
तर, सत्य नयाँ बानेश्वरमा छरपष्ट भइसकेको थियो । बानेश्वरबाट फर्केर हामी फेरि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग पुग्यौं । फेरि पनि विभागका अधिकारीले संगम स्वीट नखुलेको दावी छाडेनन् । जब हामीले पसल खुलेको भिडियो देखायौं, तब विभागका अधिकारी दंग परे ।
त्यसपछि सोमबार पनि हामी संगम स्वीट्समा पुग्यौं । त्यहाँ पुग्दा पसलको सटर लगाइएको थियो । तर शिल्ड भने तोडिएको थियो ।
त्यसपछि, सरकारी अधिकारीले लगाएको शिल्ड बिनाजानकारी आफूखुसी खोल्नेमाथि के चाहिँ के कारबाही हुन्छ भनेर विभागका अधिकारीलाई सोधेका सोध्यौं ।
सरकारले गर्ने बजार अनुगमन उपभोक्तको आँखामा छारो हाल्नका लागि मात्रै हो भन्ने एउटा तथ्य नयाँ बानेश्वरस्थित संगम स्वीट्सको प्रकरणले प्रष्ट्याएको छ । र, यसले सरकारी बजार अनुगमनकर्तामाथि पनि प्रश्न उब्जिएको छ ।
बजार अनुगमन ‘नाटक मात्रै !’
सरकारले चाडपर्वको मुखमा बजार अनुगमन तीव्र बनाए पनि खासै कारबाही भएको देखिँदैन । माथिको दवाव, पर्याप्त प्रमाणको अभाव, भित्री रूपमा मिलाउने प्रपञ्चका कारण बजारमा बेइमानी गर्नेलाई कारबाही हुन नसकेको आरोप अनुगमनकारीमाथि लाग्दै आएको छ ।
साथै कानुनमा भएको फितलोपन र कमजोरीका कारण पनि बजारमा बेइमानी गर्नेमाथि कारबाही गर्न जटिल भएको हो । कानुनअनुसार अनुगमनका क्रममा स्टोरमा भेटिएको सामान कुहिएको भेटिए पनि मुद्दा चलाउन मिल्दैन । बजारमा बेइमानी भएको तथ्य फेला परे पनि कारबाही गर्न कोही न कोही उपभोक्ताले उजुरी गर्नै पर्छ । जुन अभ्यास नेपालमा छैन ।
अनुगमनका क्रममा सिल गरेका व्यवसायिक संस्थाहरु प्नि सुधार गरेको वताएपछि सञ्चालन गर्न पाउँने कानुनी प्रावधान छ । यसरी बजार अनुगमनको विषयमा अनेक बहस भइरहँदा बजारमा बेइमानी गर्नेलाई जुन रुपमा कारबाही हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । त्यसैले बजार अनुगमन कर्मकाडी र नाम मात्रको भएको आरोप लागेको छ । तर सरकार भने बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएको दावी गर्छ ।